Cabdullaahi Yusuf oo waayaha ku shabahay markii uu xilka ka tagay, beesha caalamkana ku tuhmay gumaysi. – Radio Daljir
Abriil 14, 2011 12:00 b 0
Sanca, April 14 – Madaxwaynihii hore ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dhaliilay shirkii wada-tashiga ee arrimaha Soomaaliya kaasoo shalay lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Nairobi. Cabdullaahi Yuusuf ayaa sidoo kale ka qayb-galka Puntalnd ee shirka ku tilmaamay mid gaar ku ah madaxwayne Faroole.
Cabdullaahi Yusuf oo la hadlay laanta af-Soomaaliga ee VOA-da ayaa taageero u muujiyay mowqifka xukuumadda federaalka KMG ee Soomaaliya isaga oo dhaliilay mowqifka guddoonka barlamaanka shirku uga qayb-galay shirka.
Md. Yusuf waxa uu jiho uunan carabaabin ku tuhmay in ay Soomaaliya la doonayso gumaysi, waxase uu si toos ah beesha caalamka ugu eedeeyay in ay hay’adaha fadaraalka ka hortaagan tahay ka talinta danaha dalka, isaga oo sheegay in waxa haatan socda ay yihiin dhamatstirka sababihii uu isaga shaqada uga tagay.
Mar uu ka hadalayay ka qayb-galka shirka ee Puntland, ayuu sheegay in uu yahay qof reer Puntland ah, waxana uu ku tilmaamay madaxwayne Faroole in uu fikirkaas ku matalo naftiisa. Waxa uu sheegay in uusan ka soo horjeedin madaxwayne Faroole, balse waxa uu intaa raaciyay waa sida uu hadalka u yiriye “…ninkii sidaa madaxwayne ku raadiya isagaa isna eedi doona.”
Waa markii ugu horeeysay ee uu madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu si cad oo qayaxan siyaasadda uga hadlo isaga oo dhinacna taageeraya dhinacna naqdinaya.
Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa madaxayne ka soo noqday dawladdii ugu horeeysay ee federaalka KMG ee Soomaaliya 2004-tii illaa 2008-dii markaa oo uu xilka iskaga casilay kadib cadaadis ba’an oo uga yimid beesha caalamka. Cabdullaahi Yuusuf waxa uu haatan ku nool yahay magaalada Sanca ee dalka Yemen.